I-Prana - igumbi lokulala ezimbini eline-balcony
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIndranil
Likhaya lethu losapho olukumgangatho ophakathi elibandakanya amagumbi azimeleyo kunye namagumbi eendwendwe. Ikhaya lethu linomtsalane wehlabathi elidala kwaye libekwe ngokulula kakhulu, malunga ne-300 mtrs ukusuka kwisikhululo seMetro, luhambo olucothayo lwemizuzu emi-5. Igrosari, ikhemesti, i-confectionery kunye neevenkile zekofu zikufuphi. Iikhabhathi kunye noritsho ziyafumaneka kanye phambi kwendlu. Sihlala sigcina indlu kunye nokhuseleko. Kulumkele ukuthanda i-terrace yethu, ivulekele iindwendwe ukusuka ngo-7am ukuya kweye-10 ebusuku
Iindwendwe zingasebenzisa indlu, igumbi lokuhlala kumgangatho ophantsi, i-terrace eqhelekileyo, indawo yokungena
Ubumelwane buzolile ngokwentelekiso kunye nekhubalo eliqhelekileyo laseMzantsi Kolkata. Isikhululo semetro sihamba nje 4/5 imizuzu yokuhamba. Iindawo zokumisa iibhasi / iindawo zokumisa iimoto yi-4/5 imizuzu yokuhamba. Udederhu lweevenkile zaseSouth City yi-5/7 mins drive okanye 15 mins ukuhamba. I-Rabindra Sarovar (ichibi) yimizuzu nje eyi-10 yokuhamba, ilungele ukuhamba ekuseni okanye ngorhatya, indawo entle yababukeli beentaka.
Umbuki zindwendwe ngu- Indranil
Ihlala ikhona ngefowuni. Dibana neendwendwe ngokobuqu nanini na edolophini